11/01/13 ~ Myanmar Forward
Posted by drmyochit Friday, November 01, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၌ အင်းစိန်လမ်းမကြီးအတိုင်း အင်းစိန်ဘက်သို့သွားစဉ် ခ၀ဲခြံမှတ်တိုင်အနီး အရှိန်လွန်မောင်းနှင်လာသည့် ခရီးသည်တင်ယာဉ် ၁၈၈ ရွှေအင်းဝ ယာဉ်လိုင်းစိမ်း/၀ါယာဉ်သည် ဘရိတ်ပေါက်ကာ အငှားယာဉ်ခြောက်စီးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်တစ်စီးအား ဆင့်ကဲ့တိုက်မိခဲ့သည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်တွင် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လျှက်ရှိသည့် ရွှေအင်းဝယာဉ်မောင်းကို ယာဉ်ဆင်မခြင်မောင်းနှင်၍ ယာဉ်များပျက်စီးပြီး လူအားဒဏ်ရာရစေအမှုအဖြစ် တိုက်ခံရသည့် ယာဉ်ပိုင်ရှင်များက တိုင်ကြားပြီး ပြစ်မှုပုဒ်မ (ပ)၄၂/၂၀၁၃၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၂၇၉/ ၃၃၈/၂၀၂ဖြင့် ဘုရင့်နောင်နယ်မြေရဲစခန်း၌ အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း အဆိုပါဖြစ်စဉ်အား တာဝန်ယူထားသည့် မရမ်းကုန်းရဲစခန်းမှ ယာဉ်ထိန်းရဲအုပ်ဝင်းဌေး ထံမှ သိရသည်။
“ကားက ၃စ ကို တိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ဘရိတ်အုပ်ခါမှ ဘရိတ်ကျွံသွားပုံရတယ်၊ ဘရိတ်ပေါက်တဲ့အရှိန်နည်းရင် လမ်းဘေး ဆွဲကပ်လို့ရပေမယ့် အရှိန်များတော့ ရှောင်ရင်းနဲ့ ဆင့်ကဲတိုက်မှုတွေ ဖြစ်သွားတယ်၊ အဓိကက အရှိန်ပြင်းပြီး မဆင်မခြင် မောင်းနှင်လို့ဖြစ်တယ်” ဟု မရမ်းကုန်းရဲစခန်းမှ ယာဉ်ထိန်းရဲအုပ်ဝင်းဌေးက ပြောသည်။
အဆိုပါယာဉ်(၇)စီးဆင့်ကဲတိုက်မူကြောင့် အင်းစိန်းလမ်းမကြီး၌ (၂)နာရီခန့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့ခဲ့ပြီး ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် ကျပ် (၂၅)သိန်းကျော်ခန့်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ကျွန်တော်ကားက ရပ်ထားတာ၊ နောက်က ၀င်တိုက်ခံလိုက်ရတယ်၊ လောလောဆယ်တော့ ပိုက်ဆံကတော့ ကိုယ်အရင် ကုန်ရမှာပေါ့၊ တိုက်တဲ့ယာဉ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ကတော့ အခုမှ သိတာ၊ ယာဉ်ထိန်းက အကြောင်းထူးရင်တော့ ဆက်သွယ်မယ်ပြောတယ်” ဟု အတိုက်ခံရသည့် ယာဉ်များမှယာဉ်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
ပြစ်မှုစစ်ဆေးချက်များအရ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လျှက်ရှိသည့် အင်းဝယာဉ်လိုင်းမောင်း အောင်လွင်ဟိန်းကို သက်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ နယ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းကာ ဖမ်းဆီးရရှိရန် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းမှသိရသည်။
BY ကြယ်စင်လင်း၊ မင်းမင်း(မြစ်မခ)
Facebook ပေါ်မှ ဓာတ်ပုံများကြောင့် Software ပညာရှင်တစ်ဦး မိမိကိုယ်ကိုယ် အဆုံးစီရင်
Posted by drmyochit Friday, November 01, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
အသက်(၂၉)နှစ်ရှိ ချန်ဒန်ကူမာသည် ဂျဟာကန်တွင် နေထိုင်သည့် Software ပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်သည်
အိန္ဒိယ နိုင်ငံမှ Software ပညာရှင် တစ်ဦးသည် Facebookပေါ်မှ ဓာတ်ပုံများကြောင့် မိမိကိုယ်ကိုယ် ကြေကွဲဖွယ် အဆုံးစီရင်သွားရှာကြောင်း သိရှိရသည်။ အသက်(၂၉)နှစ်ရှိ ချန်ဒန်ကူမာသည် ဂျဟာကန်တွင် နေထိုင်သည့် Software ပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၎င်းနှင့် ဇနီးဖြစ်သူ ဆန်ဒါဟာရာတို့သည် ဘာသာမတူကြချေ။ ချန်နိုင်းတွင် နေထိုင်သော ဆန်ဒါဟာရာနှင့် လက်ထပ်ရန် ချန်ဒန်က ရည်ရွယ်ခဲ့သော်လည်း ၎င်း၏ မိသားစုက လုံးဝ သဘောမတူဘဲ တားဆီးထားခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ချန်ဒန်သည် ချန်နိုင်းရှိ ခရစ္စယာန် ဘုရားကျောင်း တစ်ခုတွင် ဆန်ဒါဟာရာ၏ အလိုအတိုင်း လက်ထပ်ခဲ့ပြီး ယင်းအစီအစဉ်ကိုမူ မိသားစု မသိအောင် လျှို့ဝှက်ထားခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း ဆန်ဒါဟာရာက မင်္ဂလာပွဲ ဓာတ်ပုံများကို Facebookပေါ်တွင် လွှင့်တင်လိုက်သည့်အခါ ချန်ဒန်၏ ဝမ်းကွဲညီအစ်ကို တစ်ဦးက စတင်သတိပြုမိသွားသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် သတို့သားဖြစ်သူ ချန်ဒန်၏ မိသားစုကို အသိပေးခဲ့သည်။ ထိုအခါ ချန်ဒန်၏ မိဘများက သားဖြစ်သူကို ချက်ချင်း ဆက်သွယ်ကာ ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန် ပြောဆိုခဲ့သလို ၎င်း၏ အသိမဲ့မှုကြောင့် မိမိတို့ အလွန် နာကျင်ခဲ့ရကြောင်း ပြောကြားခဲ့ကြသည်။ မိဘများထံမှ ခါးသီးသော စကားလုံးများကြောင့် ဝမ်းနည်းသွားသော ချန်ဒန်သည် မိမိကိုယ်ကိုယ် အဆုံးစီရင်သော နည်းလမ်းကို ထွက်ပေါက်အဖြစ် ရွေးချယ်လိုက်ရှာသည်။
ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်ကုန်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူသေမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရဲများက Facebookပေါ်မှ ဓာတ်ပုံများသည် အဓိက အကြောင်းရင်းဟု မှတ်ချက်ချခဲ့သည်။ စနေနေ့ မင်္ဂလာပွဲ အပြီးတွင် နောက်တစ်နေ့၌ ချန်ဒန်သည် အခန်းထဲမှ ထွက်မလာတော့ချေ။ ဆန်ဒါဟာရာက အခန်းထဲ ဝင်ရောက်ရှာဖွေရာ သေတမ်းစာ တစ်စောင်ရေးခဲ့ပြီး ဆွဲကြိုးချ သတ်သေထားသည့် ရုပ်အလောင်းကိုသာ တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ချန်ဒန်က မိမိသည် ဇနီးကို အလွန်ချစ်မြတ်နိုးသော်လည်း Facebookပေါ်မှ ဓာတ်ပုံများကို ဖယ်ရှားပေးရန် ဆန်ဒါဟာရာက ငြင်းဆန်သည်ကို စိတ်ပျက်ကြောင်းနှင့် ဘဝကို ရှေ့မဆက်လိုကြောင်း ရေးသားထားသည်ဟုလည်း ရဲများက ပြောဆိုသွားသည်။
Posted by drmyochit Friday, November 01, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
Posted by drmyochit Friday, November 01, 2013, under မှုခင်း | No comments
၁၃ နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ကို အမျိုးသားတစ်ဦးက အကြိမ်ကြိမ်ကာမဆက်ဆံပြီးနောက် ပြည့်တန်ဆာ အိမ်သို့ ရောင်းချစေခိုင်းခဲ့မှုကြောင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေကြောင်း အခင်းဖြစ် မြို့နယ်ဖြစ် သည့် လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရဲစခန်းမှ စခန်းမှူး ရဲအုပ်ဌေးဝင်းက အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်တွင် မဇ္ဈိမ သို့ ပြောသည်။
အဆိုပါ အမှုကို လှိုင်သာယာ၊ ---ရပ်ကွက်နေ မ----(၃၂)နှစ် ၊( ဈေး ရောင်း) က အမှုဖွင့် တိုင်တန်း ထားခြင်း လည်းဖြစ်သည်။
သူမသည် အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်က သီရိမင်္ဂလာဈေးတွင် ဈေးရောင်းနေစဉ် သမီးဖြစ်သူ မ----(၁၃နှစ် ရှစ်လ) အား နေအိမ်သို့ ပြန်လွှတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၂၅ ရက်နေ့တွင် နေအိမ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီး ခဏအိပ်၍ နိုးစဉ်သမီးငယ်၏ ကျောင်းလွယ်အိတ်အားတွေ့၍ ကျောင်းမတက်ကြောင်း သိရှိသဖြင့် စုံစမ်းရှာေ ဖွခဲ့သော်လည်း တွေ့ရှိခြင်းမရှိခဲ့ဟု ရဲထံတွင် ပြောပြထားသည်။
ထို့နောက် ၎င်းသားမယားအဖြစ် ဆက်ဆံခဲ့သူက မိန်းကလေးအား အခြားအမျိုးသားတစ်ယောက်ထံ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး ထိုမှတစ်ဆင့် ပြည့်တန်ဆာခေါင်းလုပ်သူ တစ်ဦးထံ ရောက်ရှိသွားခဲ့သည်ဟု ရဲမှတ်တမ်း များအရ သိရသည်။
“ ဒီအမှုကို မုဒိမ်းမှု (၃၇၆)အပြင်၊ ပြည့်တန်ဆာ ရောင်းချမှု (၃၇၂)၊ ၀ယ်ယူလက်ခံမှု ပုဒ်မ (၃၇၃)နဲ့ စစ်ဆေးနေ တာပါ၊ ဖော်ထုတ်ချက်အရ နောက်ထပ်တစ်ဦး ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ သိရှိရတဲ့အတွက် အားပေး ကူမှု ပုဒ်မ ၁၁၄ ပါထည့်ပြီး စစ်ဆေးနေပါတယ်။ ဒီအမှုက စစ်ဆေးဆဲဆိုတော့ တိတ်ိကျကျကြီး တော့ မပြောနိုင်သေးပါဘူး” ဟု ရဲအုပ်ဌေးဝင်း က မဇ္ဈိမသို့ ပြောသည်။
မုဒိန်းမှုကျူးလွန်သူတွေအနေနဲ့ အရွယ်ရောက် အမျိုးသမီးတွေ ကိုသာမက အရွယ်မရောက်သေး တဲ့ လူမမယ် အရွယ်အသက် ၁၂ နှစ်အောက် ကလေးတွေကို ကျူးလွန်မှု နှုန်းဟာလည်း တိုးလာခဲ့ပြီး တစ်ပြည်လုံး အတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တော့ တစ်နေ့ကို နှစ်မှုနှုန်းလောက်နဲ့ ဖြစ်ပွားနေ တာကို သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေ အရ သုံးသပ်ရရှိပါတယ်။
အသက် ၁၂ နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကို ကျူးလွန်ကြတဲ့ သက်ငယ်မုဒိန်းမှုတွေအမှာ့  အသက် ၂ နှစ်အရွယ် ကလေးကိုတောင်မှ ကျူးလွန်ကြတဲ့ မုဒိန်းမှုတွေကိုတွေ့လာရတဲ့အတွက် လိင်အကြမ်းဖက်မှု ကာကွယ်တားဆီးရေးလုပ်ငန်းတွေကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်ပြီး ဆောင်ရွက်လာရတယ်လို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
အခုလို သက်ငယ်မုဒိန်းမှုတွေ ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက် သားသမီးငယ်ရှိကြတဲ့ မိဘပြည်သူတိုင်း စိုးရိမ်ပူပင်နေရတဲ့အတွက် ပြည်သူအများစုက ဖြစ်ပွားနေတဲ့ သက်ငယ်မုဒိန်းတွေကို ဟန့်တားစေနိုင်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်မျိုးကို လိုလားနေကြတာလည်း တွေ့မြင်ရပါတယ်။
`ဒီလိုပြစ်မှုအတွက် ပြစ်ဒဏ်ကတော့ ဘယ်လောက်တောင်အားပျော့နေလို့လဲမသိဘူး၊ အခုဆိုကလေးတွေကိုတောင်မှ ကျူးလွန်နေကြတာဆိုတော့ ကျူးလွန်တဲ့ သူတွေက ဒီပြစ်ဒဏ်လောက်ကိုတော့ မကြောက်ဘူးဆိုတာ သိသာနေပြီ၊ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့လို ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ဖြစ်စေချင်တာကတော့ ဒီလိုပြစ်မှုတွေကို ထိထိရောက်ရောက်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပေးပါ၊ ကျူးလွန်မဲ့ သူတွေ နောက်မကျူးလွန်ခင်မှာ စဉ်းစားကြဖို့အတွက် ထိရောက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်မျိုး ပေးစေချင်တယ်၊ ဒါမှသာ ကာကွယ်နိုင်ပါမယ်`လို့ ကမာရွတ်မြို့နယ်က အလယ်တန်းအရွယ် သမီး ၂ ဦးရဲ့ ဖခင်က ပြောဆိုပါတယ်။
ပြည်သူတွေရဲ့ စိုးရိမ်ပူပင်သံတွေ ထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းညွန့်၊ သင်္ဃန်းကျွန်း မဲဆန္ဒနယ်က ကလေးသူငယ်မုဒိန်းမှုဆိုင်ရာပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး လွှတ်တော်တွင်း ဆွေးနွေးဖို့အဆိုကို အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တုန်းက အဆိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။
သို့ပေမဲ့လည်း လွှတ်တော်တွင်းမှာ အဆိုတင်သွင်းဖို့ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာမှာတော့ ထောက်ခံမဲ ပေးခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် ၁၉ဦးသာရှိပြီးကန့်ကွက်ခဲ့ကြတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကတောက ၃၃၁ ဦး ရှိပါတယ်။ ကိုယ်စားလှယ် ၃၃၁ ဦးကတော့ ဘာကြောင့်များ ကန့်ကွက်ခဲ့ကြတဲ့အတွက် လွှတ်တော်တွင်းမှာ မဆွေးနွေးသင့်ဘူးဆိုတဲ့ အမြင်နဲ့ပဲ ဒီကိစ္စက ရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ရပါတယ်။
`ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဒါ ကျွန်မတို့လွှတ်တော်ရဲ့သမိုင်းမှာ အင်မတန်ကိုရုပ်ဆိုးတဲ့အဖြစ်လို့ မှတ်ချက်ချရမှာပဲ။ လွှတ်တော် ကိုယ်စာလှယ်ကြီးများလည်း ဒီနေရာမှာလည်းပြန်ပြီးတော့ လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားသုံးသပ်စေ လိုပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့် ဒီလိုအဆိုမျိုးဟာလွှတ်တော်မှာ မဆွေးနွေးသင့်ဘူး လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာလဲ။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ အခုနကပြောခဲ့သလိုပဲ စီးဒေါ စာချုပ်အပေါ်မှာ နားလည်နိုင်စွမ်းနှုန်းပေါ့နော် ဒီဂရီပေါ့ အဲ့ဒါကအလွန်နှိမ့်ကျနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်က အင်မတန်ကိုရုပ်ဆိုးပါတယ် အကျည်းတန်းပါတယ် ဒီသက်ငယ်မုဒိန်းမှုတွေကိုထိရောက်ဟန့်တားတဲ့အပြစ်ဒဏ် ပေးဖို့ ဆိုတာဟာ ပညာရှင်တွေကြားထဲမှာပဲဖြစ်စေ လွှတ်တော်ကိုယ်စာလှယ်တွေကြားထဲမှာပဲဖြစ်စေ အုပ်ချုပ်ရေးလူတန်းစားကြားထဲမှာပဲဖြစ်စေ အများပြည်သူကြားထဲမှာပဲဖြစ်စေ ဒီကိစ္စဟာရှုံ့ချရမယ့် ကိစ္စအပြစ်တင်ရမယ့်ကိစ္စပါ။ ဟန့်တားတဲ့အပြစ်ဒဏ်တွေပေးရမယ့်ကိစ္စ ထင်ရှားတဲ့ကိစ္စဖြစ်သော်ငြားလည်း ဘာ့ကြောင့်လွှတ်တော်ကဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကို ပိတ်ပင်ခဲ့တာလဲဆိုတာ ကျွန်မတို့သမိုင်းကို တော့ ရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်အော်မလုပ်ကြပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ် ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခုလို သက်ငယ်မုဒိန်းမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေပြီးကလေးငယ်တွေ အကာကွယ်မဲ့နေတဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ လွှတ်တော်တွင်းကနေ ဆွေးနွေးဖို့ ကန့်ကွက်သူ ကိုယ်စားလှယ် ၃၃၁ ဦး ရှိနေတဲ့ ဖြစ်ရပ်ကိုတော့ AFXB ရဲ့ Country Director ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ကေသီရှိန် ကလည်း ခုလို ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
`အဲ့ဒီသတင်းကိုကြားတဲ့အချိန်မှာမြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်မအရမ်းစိတ်မကောင်း ဖြစ်တယ် ပွင့်ပွင့် လင်းလင်းပြောတာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကန့်ကွက်မဲများပြီးတော့ ထောက်ခံမဲ ၁၉ မဲပဲရတဲ့ကိစ္စ ဒါဟာကျွန်မတို့အနေနဲ့ ထောက်ခံတယ် ကန့်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့စကားမှာ ရှင်းရတော့မယ်လေ ဘာကို ထောက်ခံတာလဲ ဒီလိုမျိုးမတရားတဲ့ကိစ္စကို ဒဏ်ပေးသင့်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာ ထောက်ခံတာဟာ မှန်သလားမှား သလား ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီလိုမတရားတဲ့ကိစ္စကို ဒဏ်ပေး ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကို မထောက်ခံဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုရော မှန်သလားမှားသလား ကိုယ့်ရဲ့မဲဟာ ပြည်သူတွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ကိုယ်စာလှယ်တွေရဲ့မဲဟာ ပြည်သူတွေလုံခြုံ မှုကိုထိခိုက်နေတယ် ပြည်သူတွေရဲ့သားသမီးတွေထိခိုက်နေတယ် အဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါမျိုးတွေးမိတာလဲဆို တာကိုနားမလည်ဘူးရှင့် ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စာလှယ်ဆို တာကျွန်မတို့ပြည်သူတွေ ကိုယ်စား ဝင်ပြောပေးနေတာ အဲ့ဒီမှာပြည်သူတွေဖြစ်နေတဲ့ ဒုက္ခပြဿနာကိုကျွန်မတို့ မပြော ရင် ကျွန်မတို့ကိုယ်စားရှေ့ ထွက်ပြောရမဲ့အစား ဒီလိုမျိုးလိင်အကြမ်းဖက်မှုအတွက်ကို သေဒဏ်ပေးတဲ့ အပြစ်မျိုးကိုကျွန်မမပြောဘူး ဒါပေမဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကို ဘယ်လောက်ထိပေးမလဲ ပေးသင့်သလဲ ဒါမျိုးကိုကျွန်မ တုိ့တစ်ခုခုလုပ်သင့်တယ်ထင်တယ်။ ဒါကို Yes(or) No ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး ရှိတယ်မရှိဘူး ထောက်ခံတယ်ထောက် မ ခံဘူး အဲ့ဒီအဖြေနှစ်ခုတည်းနဲ့ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးရှင့်။ ဒါဟာ လူမှုရေးကိစ္စ အမျိုးသားရေးကိစ္စ။ နောက်ပြီး တော့ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကို ဖော်ပြတဲ့ကိစ္စ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမလုံခြုံဘူးလား ဒီမေးခွန်းကအများကြီးမေးစရာ ပေါပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကလေးတွေဒီလိုဖြစ်နေတာ ကျွန်မတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တစ်ခုခုမှားနေပြီရှင့် အဲ့ ဒီမှားနေတဲ့တစ်ခုကို ဘယ်သူရှင်းမှာလဲ ကျွန်မတို့အားလုံးပဲရှင်းရမှာ ကျွန်မတို့ကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ ကိုယ်စာလှယ်တွေကပဲ ရှင်းရမှာ သူတို့ရဲ့အင်းအားနဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့ဒုက္ခတွေကို ကူညီပေးဖို့ လွှတ်တော်မှာတက်နေတယ်လို့ကျွန်မ ယူဆတာပဲ ကျွန်မအနေနဲ့ ကန့်ကွက်မဲများ ပြီးထောက်ခံမဲနည်းတဲ့အတွက်ကို ကျွန်မစဉ်းစားတာထက်အားလုံး အားလုံးက စဉ်းစားဖို့လိုတယ် ဒီမဲတွေပေးတဲ့လူတွေအားလုံးစဉ်းစားဖို့လိုသလို အဲ့ဒီလွှတ်တော်မှာမဲပေးခဲ့တဲ့ လူတွေအားလုံးလည်း ပြန်လည် စဉ်းစားကြဖို့လိုတယ် ဒါကြောင့်ခုနကပြောတဲ့လွှတ်တော်မှာ တင်သွင်းသင့်မသွင်း သင့်ခုနကဆရာမမေးတဲ့မေးခွန်း တင်သွင်းသင့် မသွင်းသင့်ဆိုတာ ကျွန်မတို့ရဲ့ဆိုရှယ် Problem ကျွန်မတို့အဲ့ဒီ နေရာမှာမတင်သွင်းရင် ဘယ်မှာတင်သွင်းမလဲရှင် ကျွန်မတို့ နိုင်ငံကြီးကို နိုင်ငံခြားကခုံရုံးမှာတင်သွင်းဖို့မလိုဘူး ကိုယ့်ရဲ့ပြည်တွင်းကိစ္စကိုကိုယ့်ဟာကိုယ် ရှင်းရမယ် ဆိုတော့ ရှင်းစရာ ဘယ်မှာရှိလဲ ဆိုတော့ဒါဟာကျွန်မတို့ အားလုံး မဲပေးတဲ့သူတွေရော မဲပေးခံရတဲ့သူတွေရော ရွေးချယ်ခံရတဲ့သူတွေရော အဲ့ဒီအပြင် ကျွန်မတို့အားလုံး အားလုံးသောသူတွေ အကုန်လုံးဟာ ဒီကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တစ်နိုင်ငံလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စ ဒါနိုင်ငံတော် သမ္မတရှင်းမှ တရားသူကြီးချုပ်ရှင်းမှ တရားသူကြီးရှင်းမှ ရဲလုပ်မှ ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူး အားလုံးကတစ်မျိုးသားလုံး တာဝန်နဲ့လုပ်ရမဲ့ကိစ္စ ဒါကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုဖော်ပြနေတာ ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုဖော်ပြနေ တာ လူတွေရဲ့ လက်ခံမှုကိုဖော်ပြနေတာဆိုတော့ ကျွန်မတို့လူမျိုးကဒါမျိုးလား သိပ်နှမျောစရာကောင်းတယ် ဒါကျွန်မဖြေချင်တဲ့အဖြေပါ။
Posted by drmyochit Friday, November 01, 2013, under မြန်မာသတင်းများ | No comments
Miss International Queen ပြိုင်ပွဲ တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် မြန်မာမှ လိင်ပြောင်းသူ သညာမောင် ကိုတွေ့ရစဉ်။ Photo - EPA
နိုဝင်ဘာ ၁ရက်တွင် Miss International Queen ပြိုင်ပွဲ ၏သရဖူအတွက် နိုင်ငံပေါင်း ၁၇ နိုင်ငံမှ လိင်ပြောင်း သူ ၂၅ဦး ပတ္တရားမြို့၌ ယှဉ်ပြိုင်ကြမည်ဖြစ် သည်။ ၂၀၀၄ခုနှစ်ကစခဲ့သော ယင်းကဲ့သို့ပြိုင် ပွဲမှာ ကိုးကြိမ် မြောက်ဖြစ်ကြောင်း စီစဉ်သူများ က ပြောကြားခဲ့သည်။ ယခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ဦး ပထမဆုံးအကြိမ် အဖြစ် ပြိုင်ပွဲသို့ဝင်ရောက်လာ သည်။
''လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်လောက် တုန်းကဆိုရင် ကျွန်မယှဉ်ပြိုင်ရဲ မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ ရှိနေ ပြီဆိုတော့ ပြိုင်ပွဲဝင်ရတာ စိတ်ထဲ မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိပါတယ်'' ဟု အသက်၂၈နှစ် အရွယ် ရှိ သ ညာမောင်က ပြောကြား ခဲ့သည်။
Posted by drmyochit Friday, November 01, 2013, under သတင်းများ | 1 comment
ABSDF ရဲ့ အစုလိုက် အပြုံလိုက် လူသတ်ပွဲကြီး ကျင်းပတဲ့ရက် ၁၉၉၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့အတွက် ဂုဏ်ပြုလိုက်ခြင်း
၁) ရဲမေ ခင်ချိုဦး (ရန်ကုန်) - အသတ်မခံရခင် ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ပြီး ABSDF (မြောက်ပိုင်း) ရဲဘော်များအား ဖျော်ဖြေခဲ့ရ- သူမ၏တောင်းဆိုမှု အရ သံချောင်းမှ သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခဲ့သည်။
(၂) တပ်ကြပ် ဋ္ဌေးမြင့်ဝင်း (ရန်ကုန်) (တောင်းဆိုမှုအရ သံချောင်းမှ သေနပ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခဲ့။ အသတ်မခံရခင် မျိုးဝင်းမှ မင်းဘာတတ်နိုင် သေးလဲဟုအငြိုးတကြီးကြိမ်းမောင်းခဲ့)
(၃) ရဲဘော်မောင်မောင်ကြွယ် (ရန်ကုန်) (ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံခဲ့ရ)
(၄) ရဲဘော်သက်နိုင် ( ရန်ကုန်) (ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံခဲ့ရ)
(၆) ရဲဘော် အောင်ဖိုး ( ရန်ကုန်) ( သေဒဏ်မချခင် ခြေထောက် တွင် မိုင်းချည်ပြီး မိုင်းခွဲခြေဖြတ်ခြင်း ခံခဲ့ရ)
(၁၂) ရဲဘော် အေးမြင့် ( ကသာ ) ( ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံခဲ့ရ)
(၁၃) ရဲဘော် ကျော်ကျော်မင်း ( မုံရွာ ) ( ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံခဲ့ရ)
အထက်ပါ (၁၅) ဦးတွင်- မခင်ချိုဦးနှင့် ဋ္ဌေးမြင့်ဝင်းမှာ မိမိနှင့်အတူ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင် လုပ်အားပေးခဲ့ပြီး ABSDF (ကချင်ပြည်နယ်) သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ မေလ စစ်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၃) ကို တက်ရောက်ခဲ့သည်။ သူတို့နှစ်ဦး၏ တောင်းဆိုချက် အရ သံချောင်း မှ သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခဲ့သည်။ ကျန် (၁၃) ဦးမှာ ရက်စက်စွာ ခေါင်းဖြတ်သတ်ခံခဲ့ရသည်။ ခေါင်းဖြတ်သတ်ခြင်းကို “မျိုးဝင်း” နှင့် “လှဆိုင်း” တို့ နှစ်ဦးမှ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လှဆိုင်းမှာ ယ္ခုအခါ ABSDF ( မြောက်ပိုင်း) တွင် ပြန်လည်ပါဝင်လုပ်ကိုင်နေကြောင်းသိရသည်။
နောင်နှစ်လအကြာတွင် သူမ၏ သူငယ်ချင်းယောင်းမကို ဖိတ်ခေါ်ကာ သူမပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်း ချောကလက်ပူ ဖျော်ရည်အတွင်းဝယ် ထိုဆေးရည်ထည့်၍ ငါသောက်ပြတာကိုကြည့်ဟုဆိုကာ သောက်ခဲ့သောကြောင့် Angela Maier ကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ်ဝန်ပျက်လျောကျခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကလေးအခါခါလျောကျခဲ့သောကြောင့် ဘယ်လိုပင် စိတ်ဓါတ်ကျလို့ လုပ်တယ်ပဲဆိုဆို အပြစ်မဲ့သော ကလေးနှစ်ဦး၏ အသက်ကို ဆုံးရှုံးစေခဲ့သော Angela Maier အား သြစတြေးလျတရားရုံးက ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ခွဲနှင့် ဆိုင်းငံ့ပြစ်ဒဏ် (၁၄)ခု ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Lil Kim၏ နာမည်ကျော် VMA ပွဲတက်ဖက်ရှင်ကို တုပဝတ်ဆင်ခဲ့သည့် မိုင်လီ
Posted by drmyochit Friday, November 01, 2013, under နိုင်ငံတကာအနုပညာ | No comments
(၁၉၉၉)ခုနှစ်က Lil Kimက VMA ဆုပေးပွဲ တက်ရောက်ခဲ့စဉ် လူပြောသူပြောများခဲ့သည့် ဝတ်စုံကို မိုင်လီက လိုက်လံတုပကာ Halloweenတွင် ဝတ်ဆင်ထားခဲ့သည်။
အဖော်အချွတ် ကြမ်းမှုများကြောင့် ပရိသတ် ဝေဖန်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည့်တိုင် ယင်းအခြေအနေကို သူမ အနေဖြင့် မတုန်လှုပ်ကြောင်း မိုင်လီဆိုင်းရပ်စ်က လက်တွေ့ ပြသလိုက်သည်။ MTV၏ VMA ဆုပေးပွဲ အစီ အစဉ် တွင် ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဖျော်ဖြေမှုများကြောင့် အများဝေဖန်စရာ ဖြစ်ခဲ့သည့်တိုင် ယင်းအတွက် လုံးဝ နောင် တမရကြောင်း မိုင်လီက Halloween ဖက်ရှင် ရွေးချယ်မှုတွင် ထပ်မံသက်သေထူလိုက်သည်။ (၁၉၉၉) ခုနှစ်က Lil Kimက VMA ဆုပေးပွဲ တက်ရောက်ခဲ့စဉ် လူပြောသူပြောများခဲ့သည့် ဝတ်စုံကို မိုင်လီ က လိုက်လံတုပကာ Halloweenတွင် ဝတ်ဆင်ထားခဲ့သည်။ မိုင်လီသည် ဆံပင်ကို ခရမ်းရောင် ဆိုးခဲ့သလို ရင် ဘတ် တခြမ်းဖော် ထားသည့် ဖက်ရှင်ကိုပါ ဝတ်ဆင်ထားသည့် ဓာတ်ပုံကို လွှင့်တင်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင် အသက်(၃၉)နှစ်ရှိ Lil Kimကို ရည်ညွှန်းပြီး "ပျော်စရာ Halloween ဖြစ်ပါစေ Lil Kimရေ" ဟု လည်း ရေးသားထားသေးသည်။ Lil Kim၏ ဖက်ရှင်တွင် ရင်သားကို တခြမ်းဖော်ထားပြီး မျက်စိ ရှက်လောက် ဖွယ် အစိတ်အပိုင်းမျိုးကို အပြောက်အမွှမ်း ဘော်ကြယ်များကပ်ကာ စီခြယ်ဖုံးအုပ်ထားပြီး အသက် (၂၀) အရွယ် မိုင်လီက တစ်ထပ်တည်း တုပခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ မိုင်လီသည် ယခုသီတင်း ပတ်အ တွင်း Halloween အတွက် ရည်ရွယ်ကာ ဖရုံသီးများပေါ်တွင် မဆီမလျော် ပုံရိပ်များ ထွင်းထုထားသည့် ဓာတ်ပုံ ကိုလည်း အင်တာနက်တွင် လွှင့်တင်ခဲ့သေးကြောင်း သိရှိရသည်။
ထိုင်းတွင် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ဒဏ်ငွေကြောင့် ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြ
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ ရှိ Railway station တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသား ၁ သောင်းကျော် ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြ လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဖမ်းဆီးထားသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကို ပြန်လည် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးရန် အတွက် အစိုးရ သဘောတူသော်လည်း Amnesty bill ဟုခေါ်သည့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ငွေကြေး တစ်ရပ်ကို ချမှတ်ခဲခြင်းကြောင့် ပြည်သူများ ဆန္ဒပြခြင်း ဖြစ်သည်။ အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့က စတင်ဆန္ဒပြပြီး လူအင်အား ပိုမို၍ တိုးပွားလာခဲ့ သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်က သက်ဆင် ထောက်ခံသူ ဆန္ဒပြသူများနှင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ ရှပ်အင်္ကျီ အနီရောင်ဝတ် ဆန္ဒပြသူများကို ထိုင်းအစိုးရတို့ ဖြိုးခွင်းရာတွင် ဖမ်းဆီးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယင်း ဖမ်းဆီးထားသူများကို ပြန်လည် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးရန် တောင်းဆိုမှုများကို သဘောတူခဲ့သော်လည်း Amnesty Bill ချမှတ်ခြင်းကြောင့် ယခုလို ဆန္ဒပြခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆန္ဒပြသူများအတွက် အစားအသောက်နှင့် ရေများကို ပြည်သူ အချင်း ချင်းထောက်ပံ့ပေးလျက် ရှိပြီး အင် အား များပြားလာခဲ့သည်။ လုံခြုံရေး ရဲ အင်အား ၄ထောင်ကျော် ချထားပြီး ဆန္ဒပြပွဲကို ထိန်းသိမ်းရန် ကြိုးပမ်း လျက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။
Posted by drmyochit Friday, November 01, 2013, under ဗေဒင် | 1 comment
အမေရိကန် ဝရမ်းပြေး ဟက်ကာ Edward Snowden ရုရှားမှာ အလုပ်ရပြီ
အမေရိကန်တို့ ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတဲ့ Edward Snowden တစ်ယောက် ရုရှားမှာ အလုပ်ရပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ Edward Snowden ကို သိတဲ့သူတွေ သိကြမှာပါ။
အမေရိကန် NSA လျှို့ ဝှက်ထောက်လှမ်းရေး အေဂျင်စီမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး သတင်းအချက်အလက် များကို သယ်ဆောင်ထွက်ပြေးပြီးနောက် ရုရှားနိုင်ငံမှာ ခိုလှုံ နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် များရဲ့  မိုဘိုင်းဖုန်းကို ခိုးနားထောင်တဲ့ Tapping Project မှာလည်း ပါဝင်ခဲ့ပြီး သူ့ဆီမှာ အချက်အလက်တွေ ရှိနေမယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြ ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမေရိကန် အစိုးရဟာ Edward Snowden ကို တရားစွဲဆို ခဲ့ပြီး Snowden ရဲ့  ရှေ့ နေလည်း အမေရိကန်မှာ တရားရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းပေးနေပါတယ်။
Snowden အားဖမ်းဆီးပေးရန် အမေရိကန် တောင်းဆိုချက်ကို ရုရှားအာဏာပိုင်တို့ ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး နိုင်ငံမှာ နေထိုင်ခွင့်တောင် ပေးလိုက်ပါသေးတယ်။ အလုပ် အသစ်လည်း ရခဲ့ပြီး ရုရှားမှာနေထိုင်နေပါပြီ။ အလုပ် အမျိုးအစားကတော့ ဝဘ်ဆိုဒ် Developer ပါပဲ။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ဟက်ကာ တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လည်း ရုရှားရဲ့ အကြီးဆုံး ဝဘ်ဆိုဒ်တွေထဲက VKontakte social net မှာ အလုပ်ရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Web Security ပိုင်းကို တာဝန်ယူပေးရသူ ဖြစ်ပါတယ်။ Edward Snowden ရဲ့ အမှုဟာ ပိတ်သိမ်း၊ ပျက်ပြယ် သွားဖွယ်ရှိကြောင်း ပညာရှင်များက ခန့်မှန်းထားကြ ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အရပ်အရှည်ဆုံး တူရကီ အမျိုးသား ဆီးရီးယား အမျိုးသမီးနှင့် လက်ထပ်
ကမ္ဘာ့အရပ်အရှည်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ် စူတန်ကိုဆင် (၀ဲ) နှင့် ဇနီးတို့ကို အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်က လက်ထပ်မင်္ဂလာ အခမ်းအနားတွင် တွေ့ရစဉ် (Photo:AFP)
ကမ္ဘာ့အရပ်အရှည်ဆုံး တူရကီ အမျိုးသား စူတန်ကိုစင်သည် ဆီးရီးယား အမျိုးသမီး တစ်ဦးနှင့် အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်က လက်ထပ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အရပ် ၂ ဒသမ ၅၁ မီတာရှည်သော အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ် ကိုဆင်သည် အရပ် ၁ ဒသမ ၇၅ မီတာမြင့်ပြီး အသက် ၂၀ အရွယ်ရှိသော မာဗီဒီဘိုအား လက်ထပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
"ကျွန်တော့်ရဲ့ ခံစားမှုတွေကို စကားလုံးတွေနဲ့ မဖော်ပြနိုင်ပါဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျွန်တော်က အပျော်ဆုံးသူ ဖြစ်သွား ပါပြီ" ဟု တူရကီနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်းရှိ ကိုဆင်၏ ဇာတိမြို့ဖြစ်သော မာဒင်၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် မင်္ဂလာ ပွဲ အခမ်းအနားတွင် ကိုဆင်က ပြောကြားခဲ့သည်ဟု နိုင်ငံပိုင် အနာလိုတီယာ သတင်းအေဂျင်စီ၏ ၀က်ဘ်ဆိုက် တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဟာဆာကာ မြို့သူဖြစ်သော မာဗီဒီဗိုက "ဒီပျော်ရွှင်မှုဟာ တစ်သက်လုံး ဖြစ်ပါစေလို့ ကျွန်မမျှော်လင့် ပါတယ်" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ မင်္ဂလာပွဲ အခမ်းအနားတွင် ချည်အရှည်ရှိသော ရက်ထည်ဖြင့် ပြုလုပ် ရသည့် ရိုးရာဝတ်စုံအား ကိုစင်က ၀တ်ဆင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ တူရကီနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်းရှိ လယ် သမား မိဘများမှ မွေးဖွားလာခဲ့သူ ကိုစင်သည် ဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့မှတ်တမ်းများ စာအုပ်တွင် ကမ္ဘာပေါ်၌ အရပ် အရှည် ဆုံးဖြစ်ကြောင်း ၂၀၀၉ ခုနှစ်က သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပြီးနောက် လူသိများလာ ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က ကိုဆင်၏ အရပ် အမြင့်မှာ ၂ ဒသမ ၄၇ မီတာသာ ရှိသေးသည်။
ဦးနှောက်အတွင်းရှိ ခန္ဓာကိုယ် ကြီးထွားမှုနှင့်ဆိုင်သော ပစ်ကျူထရီ ဂလင်းအား သက်ရောက်စေသော အသားပို တစ်ခုကြောင့် ၎င်း၏အရပ် ထပ်မံရှည်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Gamma Knife ဟုခေါ်သည့် ခွဲစိတ်ပစ္စည်း အသုံးပြုပြီး ကြိမ်နှုန်းမြင့် ဓာတ်ရောင်ခြည်နှင့် ပစ်ခတ်ကာ ကိုစင် ၏ အသားပိုအား အမေရိကန် ဆရာဝန်များက ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် သြဂုတ်လ၌ ကုသပေးခဲ့သည်။
အရပ် ဆက်လက် ရှည်စေသည့် ဟိုမုန်းဖောက်ပြန်မှု ရောဂါ ကိုဆင့်တွင် မရှိတော့ကြောင်း ဆရာဝန်များက ၂၀၁၂ ခုနှစ် အတွင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ ကိုစင်သည် ချိုင်းထောက်အသုံးပြု၍ သွားလာနေရသည်။
Facebook သည် လူမှုဆက်ဆံရေး၏ နိမိတ်ပုံများ အထင်ဟပ်ဆုံးနေရာဖြစ်လာ
Posted by drmyochit Friday, November 01, 2013, under သတင်းများ | No comments
သုတေသီများသည် Facebook ဝက်ဘ်ဆိုက် သုံးစွဲသူများအနက် (၁.၃)သန်းခန့်၏ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများကို လေ့လာကာ အချစ်ရေး အဆင်မပြေသည့်အခါ ကြိုတင် နိမိတ်ထင်လာတတ်ကြောင်း ကောက်ချက်ချခဲ့သည်။
Facebook သည် အချစ်ရေး အကွဲအပြဲ ဇာတ်လမ်းများကို ကြိုတင် နိမိတ်ဖတ်နိုင်သည့် စွမ်းရည်မျိုး ရှိလာပြီဟု သုတေသီများက တင်စားပြောကြားလိုက်သည်။ သုတေသီများသည် Facebook ဝက်ဘ်ဆိုက် သုံးစွဲသူများအနက် (၁.၃)သန်းခန့်၏ မှတ်တမ်းမှတ်ရာများကို လေ့လာကာ အချစ်ရေး အဆင်မပြေသည့်အခါ ကြိုတင် နိမိတ်ထင်လာတတ်ကြောင်း ကောက်ချက်ချခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် အချစ်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး InaRelationshipဟု သတ်မှတ်ထားရာမှ It's Complicatedဟု ပြောင်းလဲလိုက်မှုမျိုးသည် လူတစ်ယောက်၏ လူမှုဘဝကို ကြိုတင် အရိပ်ထင်စေကြောင်း ပညာရှင်များက ထောက်ပြခဲ့သည်။ အမှန်တကယ် အချစ်ရေး မပြိုကွဲခင် Facebookတွင် မိမိတို့၏ အတွင်းစိတ်များကို လူအများက အရိပ်အမြွက်မျှဖြစ်စေ ထုတ်ပြလာတတ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ကွန်နဲလ် တက္ကသိုလ်တွင် ပြုလုပ်သော သုတေသန ရလဒ်တစ်ခုက Facebookနှင့် Social Mediaများအပေါ် လူအ များ မှီတွယ်မှု ပိုမိုအားကောင်းလာသည်နှင့်အမျှ အတွင်းရေး ခံစားချက်များကို သွန်ထုတ်ရန် အသုံးများ လာကြောင်း ညွှန်ပြလျှက်ရှိသည်။ ထို့အပြင် စုံတွဲတစ်တွဲနှင့် တိုက်ရိုက်သိကျွမ်းမှု မရှိသည့်တိုင် ယင်း တို့နှင့် ဆက်စပ်သူငယ်ချင်းများထံမှတစ်ဆင့် ထိုစုံတွဲ၏ လားရာအခြေအနေ ကောင်းမကောင်း ဆိုသည် ကိုပါ ခန့်မှန်းလာနိုင်လိမ့်မည်ဟု ယင်းတက္ကသိုလ်မှ လူမှုဆက်ဆံရေး ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသီ များက ကောက်ချက်ချခဲ့သည်။ ယခုသုတေသန စစ်တမ်း၏ နောက်ကွယ်မှ ပညာရှင်များက Facebook တွင် လူတစ်ဦး၏ စိတ်ခံစားချက် အရိပ်အကဲသည် ဆက်စပ်နေသည့် မိသားစုနှင့် မိတ်ဆွေများထံ အလွယ် တကူ ပျံ့နှံ့တတ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။
သုတေသီများက Facebookတွင် သူငယ်ချင်း တစ်ဦး၏ ကြားခံသူငယ်ချင်းများ ရောနှောနေခြင်းထက် နယ်ပယ်အသီးသီး ခွဲထားခြင်းက ဆက်ဆံရေး ပိုမိုခိုင်မြဲစေကြောင်းလည်း ဆိုသည်။ ထို့အပြင် Social Network များ၌ တစ်ဦးချင်း ဆက်ဆံရေး ခိုင်မြဲမှုထက် မိမိ၏ အမှန်တကယ် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူ အရေ အ တွက် ချိတ်ဆက်မှု ကျယ်ပြန့်ခြင်းကလည်း ပိုမိုအရေးပါသည့် ညွှန်ကိန်း ဖြစ်လာကြောင်း ပညာရှင်များက မှတ်ချက်ပြု သွားသည်။
Posted by drmyochit Friday, November 01, 2013, under ဗဟုသုတ | 8 comments
တနေ့တော့ အသက် ၃၀ ကျော် ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာ တစ်ယောက် ရုံးဆင်းချိန်လောက်မှာ သူ့ရဲ့ရုံးခန်းကနေ ရုံးရှေ့ရပ်ထားခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ အမိုးပွင့် ကားအသစ်လေးကို လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ ကားနားမှာ ၁၃ နှစ် အရွယ် ကောင်လေး တစ်ယောက်ဟာ ကားလေး ကို လှည့်ပတ်ကြည့်နေပြီး သဘောကျဟန်နဲ့ ကားကို ကိုင်ကြည့်လိုက် အတွင်းထဲက ကားကူရှင်များကိုပါ ငေးကြည့်လိုက်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတာ တွေ့လိုက်တယ်။
ဒီတော့ ကားကို တခုခုနဲ့များ ခြစ်ပေးလိုက်ရင် ဒုက္ခ ဆိုပြီး စိုးရိမ်စိတ်လေး ၀င်လာတော့ ရုံးကနေ ခပ်တုတ်တုတ် ဆင်းခဲ့တယ်။
ဟိတ် ကောင်လေး.. ဘာလုပ်နေလဲ ... ဆိုတော့...
ကောင်လေး မျက်နှာက ကြောက်ရွံ့ မနေပဲ... ကားပိုင်ရှင်လား... လို့ တည်ငြိမ်စွာမေးလာတယ်....
ဟုတ်တယ်လေ... လို့ ခပ်ပြတ်ပြတ် ဖြေမိတယ်...
ကောင်လေးက..... အရမ်းသဘောကျတယ်ဗျာ... အစ်ကို ၀ယ်တုန်းက ဘယ်လောက် ပေးလိုက်ရလဲ.... လို့ မေးတယ်...
သူက... အစ်ကို့ဆီက မွေးနေ့လက်ဆောင်ရတာပါ.... လို့ ပြီးစလွယ်ဖြေလိုက်တယ်...
ဒီတော့ ကောင်လေးက ရင်ခုန် အံ့သြစွာနဲ့... ဟာ ဟုတ်လား... ဆိုပြီး အရမ်းကို အားကျသွားပုံနဲ့ ငေးကြည့်နေတယ်....
ဒီတော့... သူလဲ ကောင်လေးကို စိတ်ဝင်စားသွားပြီး... ကားလိုက်စီးမလား... လို့ မေးတယ်...
ကောင်လေးက မဆိုင်းမတွပဲ.. ဟုတ်ကဲ့လို့ ပြန်ဖြေတယ်....
လမ်းတလျှောက်လုံး... ကောင်လေးဟာ ကားစီးရလို့ ပျော်နေပုံ မပေါက်ပဲ... အတွေးတခု ထဲမှာ နစ်မျော နေဟန်တွေ့ရတယ်..... တနေရာ အရောက်မှာတော့... ရုတ်တရက် အခွင့်အရေး တခုတောင်းတယ်...
အစ်ကိုရေ ကျနော့ကို အိမ်ရှေ့ထိ လိုက်ပို့ပေးပါလား... ဆိုပြီး တောင်းဆိုတယ်...
ဒီကောင်လေး သူ့ရပ်ကွက်ထဲက သူငယ်ချင်းတွေကို ကြွားချင်ပုံရတယ်... ဆိုပြီး.. သူလဲ အားနေတာနဲ့ လိုက်ပို့ဖို့ သဘောတူလိုက်တယ်။
နွမ်းပါးသူများ စုနေကြတဲ့ လူနေရပ်ကွက်ထဲက လမ်းကျင်းလေးများအတိုင်း အကွေ့အကောက်တွေ ကျော်သွားပြီး တနေရာအရောက်မှာတော့ အိမ်တန်းလျား တခုရှေ့မှာ ရပ်ခိုင်းလိုက်တယ်။
ပြီးတော့... ကားထဲက ခပ်တုတ်တုတ်ဆင်းပြီး ခဏလေးနော်.. မသွားသေးနဲ့အုံး၊ ကျေးဇူးပြုပြီး ခဏလေး စောင့်နေပေးပါ... လို့ ပြောပြီး အိမ်အပေါ်ထပ်ကို အပြေးလေး တက်သွားတယ်.....
ခြေမသန်တဲ့ သူ့ရဲ့ ညီလေးကို မနိုင်မနင်း ပွေ့ချီပြီး ဆင်းလာတယ်... ပြီးတော့... ကားကို လက်ညှိးထိုးပြပြီး... သူ့ညီလေးကို ပြောလိုက်တယ်...
ညီလေး... ဟိုကားကို ကြည့်လိုက်... သူ့အစ်ကိုက မွေးနေ့ လက်ဆောင် ၀ယ်ပေးတာတဲ့... အစ်ကိုလဲ ညီလေးကို တနေ့နေ့မှာ ဒီလို ကားဝယ်ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားမယ်.. အားမငယ်နဲ့ သိလား... အဲဒီအချိန်ရောက်ရင် ညီလေးကြိုက်တဲ့ နေရာသွားလို့ရပြီပေါ့... လို့ ပြောလိုက်တော့... ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာလေးဟာ သူ့ကိုယ်သူတောင် ရှက်သွားပါသတဲ့။ နောက်ပြီး မလေးစားပဲ မနေနိုင်လို့ ညီအစ်ကို နှစ်ယောက်စလုံးကို မြို့အနှံ့ လိုက်ပို့ရင်း တစ်ညတာ အချိန်ဖြုန်းလိုက်မိတယ်။
Posted by drmyochit Friday, November 01, 2013, under နည်းပညာ | No comments
စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက် နေ့တုန်းက Cupetrino ကနေ iPhone အသစ်တွေ ဖြစ်တဲ့ iPhone 5C နဲ့ iPhone 5S တို့ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီးနောက် iPhone တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပြောစရာစကားတွေ အများအပြား ထွက်ပေါ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ iPhone5ကိုပဲ ဒီအတိုင်း အဆင့်မြှင့်တင် ထားတာလား၊ ဘယ်လို ထူးခြားတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ ပြုလုပ်ထားသလဲဆိုတာ အသေအချာ လေ့လာနေကြပါပြီ။ Apple ရဲ့ တရားဝင် ဖော်ပြတဲ့ အချက်အလက်တွေအရ iSight ကင်မရာအသစ်၊ 64 bit A7 Chip အသစ် အစရှိတဲ့ တီထွင်မှု အသစ်တွေ နဲ့ ထိပ်တန်းစမတ်ဖုန်းနေရာကို ဆက်လက် ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ အတွက် Apple ရဲ့ ရှယ်ယာပိုင်ရှင်တွေအဖို့ Apple ကို အထင်ကြီး လေးစားစရာတွေ အလုံအလောက် ရရှိသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Apple TV နဲ့ iWatch အကြောင်း ကရော ဘာတွေ ဖြစ်သွားပြီလဲ။ လောလောဆယ်မှာတော့ လုံးဝ တိတ်ဆိတ်နေပြီး အချိန် အနည်း ငယ် ကြာမှသာ ပြန်လည် သတင်းထွက်ပေါ်လာနိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းကြပါတယ်။ လက်ရှိ အချိန်မှာ ကမ္ဘာ့သ တင်း မီဒီယာအကြား ရေပန်းအစားဆုံး အကြောင်းအရာကတော့ Apple ရဲ့ နည်းပညာ အသစ်အဖြစ် iPhone 5S မှာ ထည့်သွင်းပေးလိုက်တဲ့ Touch ID အကြောင်းပါပဲ။ fingerprint sensor တစ်နည်းအားဖြင့် လက်ဗွေအာရုံစနစ် အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်မယ့် ဒီနည်းပညာဟာ သတင်းမီဒီယာတွေ၊ Website တွေ၊ Blog တွေနဲ့ နည်းပညာသမားတွေ အကြားထဲမှာ အလှုပ်ခတ်ဆုံး နည်းပညာ တစ်ခုအဖြစ် တစ်မုဟုတ်ချင်း ရောက်ရှိသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထုံးစံအတိုင်း iOS အသစ်၊ iDevice အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့အခါ Hacker တွေ အနေနဲ့ ဘယ်လို ချိုးဖောက်နိုင်တယ်၊ ဘယ်လို bug တွေပါလာတယ် စသည်ဖြင့် ပြောဆိုသံတွေဟာလည်း ပလူပျံအောင် ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ Apple ရဲ့ လုံခြုံရေး စနစ်သစ်ဖြစ်တဲ့ Touch ID ကိုလည်း ဘယ်လို အားနည်းချက်ရှိတယ်၊ ဘယ်လို ဟာကွက် ရှိတယ်ဆိုပြီး ဝေဖန်ပြောဆိုသံတွေ အများအပြား ထွက်ပေါ်လာလျက် ရှိပါတယ်။ ဒီလို ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတွက် Apple ဟာ iDevice အသုံးပြုသူတွေကို Touch ID နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု စိုးစဉ်းမျှ မဖြစ်ပေါ်ဖို့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် နိုင်ငံခြားဖြစ် ဘီယာ၊ ၀ိုင်၊ အေးခဲအသားများ တရားမ၀င် တင်သွင်းဖြန့်ဖြူး နေကြောင်း တိုင်ကြား၍ ၀င်ရောက်စစ်ဆေး
လိုင်စင်မရှိဘဲ တင်သွင်းထားသည့် Heineken ပုလင်းများကို တွေ့ရစဉ်
လှိုင်မြို့နယ်၊ ၂ ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်နောင် လမ်းဆုံရှိ Quarto Product ကုမ္ပဏီတွင် နိုင်ငံခြားဖြစ် ဘီယာ၊ ၀ိုင်၊ အေးခဲ အသားများ တရားမ၀င် တင်သွင်းနေသည်ဟု တိုင်ကြားချက်အရ Mobile Team မှ ၀င်ရောက် စစ်ဆေးနေကြောင်း သိရသည်။ ယင်းသို့ တိုင်ကြားချက်ကို ၂၆ ရက်က ရန်ကုန်Mobile Team သို့ သတင်းရောက်ရှိလာပြီး တိုင်ကြားထားသော စက်ရုံ၏ အခြေအနေကို လေ့လာစောင့်ကြည့်ကာ ၂၇ ရက်မှစပြီး ၀င်ရောက် စစ်ဆေးခဲ့ကာ တိုင်ကြားထားသော နိုင်ငံခြား ဘီယာ၊ ၀ိုင်နှင့် အေးခဲအသားတို့ကို တွေ့ရှိထားကြောင်း Mobile Team အဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
စစ်ဆေးတွေ့ရှိထားသော ဘီယာများမှာ Heineken ပုလင်းများနှင့် ဂျာမနီ ဘီယာနှစ်မျိုးတို့ ဖြစ်ပြီး အလုံးပေါင်း ၂၄၀၀ ခန့် ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သြစတြေးလျ၊ ပြင်သစ် စသည့်နိုင်ငံတို့မှ ထုတ်လုပ်ထားသည့် ၀ိုင်ပုလင်းပေါင်း ၃၀၀၀၀ နီးပါး ပါဝင်ပြီး အေးခဲအသားများတွင် အမဲသား၊ ဆိတ်သားများလည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
သို့သော် ၎င်းပစ္စည်းများမှာ တရားဝင်ပစ္စည်း ဟုတ်မဟုတ်ကို ဆက်လက် စစ်ဆေးနေပြီး တွေ့ရှိထားသော ပစ္စည်းများထဲမှ Heineken ပုလင်းများမှာ တင်သွင်းခွင့် လိုင်စင်မရှိဘဲ တင်သွင်း ထားကြောင်းကိုသာ လတ်တလော စစ်ဆေးတွေ့ရှိထားကြောင်း Mobile Team အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အစစ်ဆေး ခံနေရသော ကုမ္ပဏီမှ ဒါရိုက်တာဖြစ်သူကမူ မိမိတို့အနေဖြင့် ပြပွဲပြုလုပ်ရန် ရှိကြောင်း၊ ယင်းပြပွဲမှာ နီးကပ်လာသဖြင့် ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ Heineken ပုလင်းများကို လိုင်စင်မရှိဘဲ အမြန်ဆုံး တင်သွင်းလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဖြေရှင်းပြောကြားသည်။
Skype ကိုကောင်းစွာအသုံးပြုတတ်အောင် မြန်မာလိုရေးသားထားသော စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ရေးသားသူကတော့ ဒေါ်စုကြည်ထွေး ဖြစ်ပါတယ်။ သိမ်းထားတာကြာပါပြီ တောင်းဆိုလာတဲ့သူငယ်ချင်း
တွေအတွက် ပြန်လည်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အထဲမှာပါဝင်တဲ့ အခန်းတွေကတော့...
Skype အကောင့်တစ်ခုကိုလွယ်လွယ်ကူကူဘယ်လိုလုပ်မလဲ ?
Skype ရဲ့ Profile တွေကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ ?
Skype ရဲ့ Password တွေကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ ?
Skype မှာဘာသာစကားတွေဘယ်လိုပြောင်းမလဲ ?
နောက်ထက်များစွာသော အခန်းပေါင်း 31 ခန်းပါဝင်ပါတယ်။ အဆုံးထိတော့မရေးတော့ပါဘူး။
Zippyshare ၊၊၊ One2Up
မိသားစုများ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည့် အတွက် အချိန်မရွေး လာရောက် စစ်ဆေးနိုင်ဟု သူရဦးရွှေမန်း ပြောပြီ
မိမိအပါအ၀င်၊မိသားစုများ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည့် အတွက် အချိန်မရွေး လာရောက် စစ်ဆေးနိုင်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းက ယနေ့ပြော သည်။
“အလုပ် မလုပ်ပဲနဲ့ ဘာနဲ့စားမလဲ။ နိုင်ငံသားတစ်ယောက် အခွင့်အရေးဆုံးရှုံး ခံလို့ မဖြစ်ဘူး လုပ်တဲ့အခါမှာ နိုင်ငံ သား တစ်ယောက်ရဲ့ အခွင့်အရေးကို ယူတဲ့အခါမှာ ဥပဒေနဲ့ အညီဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ ဥပဒေ အပြင် မရောက် ရဘူး။ လူကြီးသားသမီးမို့လို့ အခွင့်အရေး ပို မယူရဘူး။ ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ ဆောင်ရွက် ခိုင်း တယ်။ ဒီနေ့ သူတို့တွေ ထိုက်သင့်တဲ့ အခြေအနေရောက်ပြီး ပြောရဲတယ် သေချာတယ်။ ကိုယ်ကိုကိုယ် ဗိုလ် ချုပ်ကြီး တစ်ယောက်အနေနဲ့ သူတို့ တစ်တွေကို တပ်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းမှာ မလျှော် သြဇာ သုံးပြီး တစ်ခုမှ မခိုင်းခဲ့ဘူး။
အဲဒီ အတိုင်းပဲ နယက အဖွဲ့ဝင် တစ်ယောက် အနေနဲ့ လဲ သူတို့ကို ပိုပြီးတော့ အခွင့်အရေးပေးခိုင်ခဲ့တာလဲ တစ်ခုမှ မရှိဘူး။ မိမိ ဘက်က ဒီနေ့ သူတို့ စီးပွားရေး လုပ်နေကြတယ် ဘာတွေ လုပ်နေကြတယ် ဆိုတာ တရားဝင်လုပ်နေကြတယ်။
အဲဒီအတိုင်းပဲ သူတို့ တတွေ စီးပွားရေးလုပ်ပြီးတော့ ရတဲ့ ၀င်ငွေ က အခွန် အကောက် ဆိုင်ရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း သူတို့ကို ဥပဒေနဲ့ အညီ ဆောင်ရွက်ခိုင်းထားတယ် ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့ပြော တယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သတ်လို့မိမိ အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ မိမိ မိသားစု အတွက်သော်လည်ကောင်း အဓိက မိမိ ကိုယ်ကို မိမိတာဝန်ယူတယ်။ ကလေးတွေ အတွက် ကလေးတွေ တာဝန်ယူနိုင်အောင်လုပ်ထားတယ် ။ အချိန်မရွှေး စစ်ခံနိုင်တယ်။ အချိန်မရွှေး လာရောက်လေ့လာနိုင်တယ်”ဟု ၎င်း ကပြောသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်သမ္မတ ဖြစ်ချင်သူတစ်ဦးအနေဖြင့်၊သားသ္မီးများ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး အသံအမျိုးမျိုးထွက်နေခြင်း၊ မိသားစု၏ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ပတ်သတ်ပြီး အမျိုးမျိုးဝေဖန်မှု များရှိနေသည့် အတွက် Clear ရှိနိုင်ပါမလား ဟု သတင်းမီဒီယာ သမားများ၏ မေးမြန်းမှုကို အထက်ပါ အတိုင်းပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွှေးကောက်ပွဲတွင် ယခုလက်ရှိ နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ၀င်ရောက်အရွေးချယ် ခံခြင်း ပြုတော့မည် မဟုတ်ဟု မိမိကို ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း က မီဒီယာသမားများ ၏ မေးမြန်းမှုကို ဖြေကြားခဲ့သည်။
ယနေ့နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပနေသော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပုံမှန်အစည်းအဝေးပြီးမြောက် ချိန် နောက်ပိုင်း မွန်းလွဲ(၁း၀၀)နာရီ ခန့်တွင်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းက သတင်းမီဒီ ယာများနှင့် ဇမ္မူသီရိ အဆောင် မီဒီယာခန်း တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
National Geographic စာဖတ်သူတို့၏ လက်ရာ ဓာတ်ပုံကောင်းများ ပြသ
မဂ္ဂဇင်းကြီး၏ စာဖတ် ပရိသတ် များစွာတို့က ထောင်နှင့် သောင်းနှင့်ချီသော ဓာတ်ပုံများကို ပေးပို့ခဲ့ပြီး National Geograpicက Your Shotဆိုသော ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် အကောင်းဆုံး ဓာတ်ပုံများကို အယ်ဒီတာအဖွဲ့က စုစည်းပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
National Geographic မဂ္ဂဇင်းသည် ထုတ်ဝေမှုသက်တမ်း (၁၂၅)နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အတွက် ပရိသတ်များက ပေးပို့သည့် ဓာတ်ပုံကောင်းများကို ထပ်မံထုတ်ဖော် ပြသလိုက်သည်။ မဂ္ဂဇင်း အထူးထုတ်တွင် ပါဝင်မည့် ဓာတ်ပုံလက်ရာမွန် အချို့ကို ပထမအကြိမ် ပြသခဲ့ဖူးပြီး ယခုတစ်ဖန် နောက်ထပ် လက်ရာကောင်းများကို ထုတ်ပြလာခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ မဂ္ဂဇင်းကြီး၏ စာဖတ် ပရိသတ် များစွာတို့က ထောင်နှင့် သောင်းနှင့်ချီသော ဓာတ်ပုံများကို ပေးပို့ခဲ့ပြီး National Geograpicက Your Shotဆိုသော ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် အကောင်းဆုံး ဓာတ်ပုံများကို အယ်ဒီတာအဖွဲ့က စုစည်းပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အချို့သော ဓာတ်ပုံများသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူသူအရောက်အပေါက် အနည်းပါးဆုံး၊ အသီခေါင်ဆုံး ဒေသများမှ မှတ်တမ်းများပါ ပါဝင်နေသည်။
မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာအဖွဲ့သည် (၁၂၅)နှစ်ပြည့် အထူးထုတ်အတွက် စာဖတ်သူများက ဓာတ်ပုံများ ပါဝင်ပေး ပို့ရန် အလေးအနက် ပန်ကြား တိုက်တွန်းခဲ့ပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ အံ့မခမ်း ဖန်တီးမှုများကို တွေ့ရှိလာခြင်း ဖြစ် သည်။ အယ်ဒီတာအဖွဲ့က ကမ္ဘာကြီး၏ နေ့စဉ် ဖြစ်ပျက် ပြောင်းလဲမှုများကို စကားလုံး မပါသော စကား အခွန်း ထောင်ပေါင်းများစွာဖြင့် ယခုဓာတ်ပုံများက ပြောပြနေကြောင်း ညွှန်းဆို ချီးကျူးခဲ့သည်။ National Geograpicက ဒုတိယအသုတ် ထုတ်ပြခဲ့သည့် ဓာတ်ပုံများအနက် အချို့ကို ယခုကဲ့သို့ စုစည်းဖော်ပြ လိုက်ပါသည်။
မိုင်းရှူး - တောင်ကြီးလမ်းတွင် ဓါးပြတိုက်မှု ဖြစ်ပွားရာ ရှေ့ရှိရဲများ တွေ့ရာ ရှေ့တွင်ဓါးပြ တိုက်နေသည်ဟု ပြောရာ ရှေ့မဆက်ဘဲ နောက်သို့ ပြန်လှည့်သွားကြောင်း
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း မိုင်းနောင်မြို့နယ်( မိုင်းရှူး - တောင်ကြီးလမ်းမပေါ်) ၌ ဓါးပြတိုက်မှု သုံးရက် ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဒေသခံ များပြောပြချက်အရ သိရပါသည်။
အောက်တိုဘာ ၂၆ - ၂၈ ရက်နေ့အထိ တောင်ကြီး - မိုင်းရှူး လမ်းမပေါ် ဟဲဆိုင်ရွာနှင့် ဟန်နားကျေး ရွာကြား အက်စ်ကွေ့ ခေါ် နေရာ ၌ ဓါးပြသုံး ယောက်က တူမီးသေနတ်ကိုင်ကာ နေ့စဉ် ဓါးပြတိုက်နေ ကြောင်း၊ ဗင်ကားများ၊ ဘီအဲမ်ကားများ၊ ဖိုးဝှီးဟိုင်းလက် ကားများအား ဟန့်တား၍ ဓါးပြတိုက်ခဲ့ကြောင်း၊ နေ့စဉ်ပိုက်ဆံကျပ်သိန်းချီနှင့် ရွှေဆွဲကြိုးများ၊ လက်စွပ်များ ဓါးပြတိုက်ခံကြောင်း ဒေသခံခရီး သွားများက ပြောပြသည်။
အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက် ညနေ ၄ နာရီ ခွဲခန့် ဓါးပြတိုက်ခံရသည့် မိုင်းရှူးဒေသခံ တဦးကလည်း ဓါးပြများ သည် ကားပေါ် ရှိစား သောက် ဖွယ်ရာများပင်ယူဆောင်သွား ကြောင်း၊ ၎င်းတို့ဖိုးဝှီးကားပေါ်ပါရှိသူများ ကျပ်ငွေရှစ်သိန်းကျော်နှင့်အတူ (ရွှေဆွဲကြိုး နှစ်ကုံး၊ ပတ္တမြား ဆွဲတီးတလုံး၊ ဆွဲပြားတခု၊ လက်စွပ် တကွင်း) ကျပ်သိန်း ၂၀ ကျော် တန်ဖိုးရှိသည့် လက်ဝတ် ရတနာများလည်းပါသွား ကြောင်းပြောသည်။
“ကျနော်ကလေးကို ကျောင်းသွားပို့ပြီး ပြန်လာတာ။ ပိုက်ဆံမ ကျန်တော့ လို့ သောင်းဂဏန်းလောက်ပဲ ပါသွားတာ။အဲဒီဓါးပြကခြုံထဲ မှာတော့ ရှိသေးလားမသိဘူး၊ လမ်းပေါ်မှာတော့ သုံးယောက်ဘဲတွေ့တယ်။ တူမီးသေနတ်တွေနဲ့ဘဲ။ နှစ်လုံးပြူး တူမီးသေနတ် အမျိုးအစားလဲပါတယ်။” - မိုင်းရှူးမြို့ခံစိုင်းအေးက ပြောသည်။
ထို့အတူ ကျေးသီးခရီးသည် လဲချားဒေသခံ နန်းမြဆိုသူကလည်း - ဓါးပြတိုက်ခံရပြီးနောက် လမ်းပြင်ကား အပြာ စီးနင်းလိုက်ပါလာသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၈-၉ ဦးခန့်တွေ့ဆုံကြောင်း၊ အက်စ်ကွေ့တွင် ဓါးပြတိုက် မှုဖြစ်နေ သည့်အကြောင်း ပြောပြရာတွင် ရဲများကခရီးမဆက်တော့ ဘဲ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့် သွားကြောင်း - ပြောသည်။
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း မိုင်းနောင်မြို့နယ်ခွဲ ရှိ နာမည်ကြီး အက်စ် (S) ကွေ့ တွင် ဓါးပြတိုက် မှု မကြာခဏ ဖြစ်ပွါးခဲ့ပါသည်။ ယမန်နှစ် ကလည်း မြန်မာ စစ်ကြောင်းနှင့် ဓါးပြအဖွဲ့တိုးမိသောကြောင့် ရင်ဆိုင်တိုက် ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ မြန်မာစစ်အရာရှိ တဦးသေ ဆုံးပြီး ရဲဘော်တဦးဒဏ်ရာ ရှိခဲ့ဖူးပါသည်။
ဓါးပြတိုက်မှု မကြာခဏ ဖြစ်ပွားတတ်သည့်အက်စ်ကွေ့ သည် ကျေးသီး အခြေစိုက် ခလရ ၉ နှင့်နီး သကဲ့သို့ မိုင်းနောင်မြို့နယ်ခွဲ အခြေ စိုက် အမှတ်(၂) စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲ မှု ဌာနချုပ် နှင့်လည်း ၁၀ မိုင်ခန့်သာဝေးေ ကြာင်းဒေသခံများကပြောသည်။
စာအုပ်အမည်းPHOTOSHOP
ရေးသားသူးမြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
အမျိုးအစားးpdf
အရွယ်အစားး9.74MB
ဒီ PHOTOSHOP စာအုပ်လေးကတော့ photoshop သမားတွေအတွက် အသုံးဝင်မယ့် စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ပါ။ ပြုပြင်တဲ့ နည်းတွေလည်း စုံပြီး ရှင်းအောင်လည်းရေးထားပါတယ်။ photoshop ဝါသနာပါတဲ့ မိတ်ဆွေများက လိုချင်ရင်တော့အောက်မှာ downland ယူသွားပါ။
Direct Lint | Googl Dirve | Mediafire | Zippy Share